ajago Donald Trump flagụ mba Rọshịa
Photo a si n'aka ndi CNN
Mba Amerịka amalitego ime nnyocha iji mata otu mmiri siri ba n’opi ugbọgụrụ. Pentagon, isi ụlọ ọrụ ndị soja n’obodo Washington agwago ndị nta akụkọ na gọọmenti mba Amerịka na-eme nnyocha ugbu a maka ọnwụ mmadụ anọ ndị soja Amerịka ahụ e gburu na mba Niger, na mpaghara ọdịda anyanwụ mba Afrịka.
Otu nwanyị onye rụrụ Gọvanọ Chris Christie ọrụ dịka onye aka mbụ ya na Steeti New Jersey agwana ndị ọkaịkwe na Gọvanọ Christie mara ịhe banyere brijigeti.
Brijigeti bụ aha E jiri mara arụ ahụ mere n’obodo Fort Lee na New Jersey, site n’abalị 9 ruo abalị 13 nke ọnwa septemba afọ 2013.
Gọọmenti Canada ga-enye ndịda-anyanwụ Afrịka ọgwụ mgbochi ebola
Gọọmenti mba Canada ekwuela na o ge-enye otu puku ọgwụ e ji eme ntule ọgwụgwọ nje ọrịa ebola, iji nye aka gbochie ndapụta ọrịa na mpaghara ndịda anyanwụ Afrịka. O mere mkpebi a ka ụlọ ahụike mba ụwa bụ World Health Organisation kwuputere na o ziri ezi iji ọgwụ a na-ejibeghị gwọọ ọrịa iji gwọọ ndị na-arịa ọrịa ebola.